Hanomboka hitsara an’ireo raharaha heloka bevava mi isa 246 ny Pôle anti corruption – Ao raha du 26 février 2019 | NEXTHOPE RANARISON Tsilavo Corruption de la justice à Madagascar
Corruption MadagascarHanomboka hitsara an'ireo raharaha heloka bevava mi isa 246...
Hiroso amin’ny fitsarana an’ireo raharaha goavana. Tanteraka, omaly, tetsy 67 ha ny fametrahana amin’ny fomba ofisialy an-dRazafindrakoto Solofohery, tonian’ny Fampanoavana ambony, izay hisahana ny fitantanana ny Fitsarana manokana misahana ny raharahana kolikoly (PAC). Fantatra taorian’ny lanonana ofisialy na tao teny an-toerana fa »efa hanomboka hiroso amin’ny fitsarana an’ireo raharahana kolikoly mifandraika amina heloka bevava ireo mpitsara ao amin ‘ny PAC ».
Miisa enina amby efapolo sy roanjato eo ho eo ny raharahana kolikoly voaray ary tokony hotsarain’ity rafi-pitsarana ity, ka mitovy amin’ny asa tanterahin’ireo Fitsarana samihafa misy eto amintsika ihany ny fomba hanatontosan’ny PAC ny asany. Mandalo fanadihadiana sy famotorana avokoa ireo raharaha voarain’ny PAC etsy 67 ha, izay avy amin’ny Birao mahaleotena iadiana amin’ny kolikoly (Bianco) ny ankamaroany.
« Mbola vao nandray ny asako aho izao, ka mbola vao hijery an ‘ir eo raharaha samihafa miandry ahy sy ireo mpikambana ao amin 1ny PAC », hoy Rafindrakoto Solofohery, izay vao nandray ny toerany omaly.
Previous articleDouble exécution sommaire en public par la police à Madagascar – Expressmada du 26 février 2019
Next articleRaharaha Henry Rabary Njaka izay afaka nandeha any France – Io indray ilay sinema sy kolikoly – La gazette de la grande ile du 26 février 2019